Shina hanokatra ny sisintaniny aorian'ny vaksiny 85% an'ny mponina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » Shina hanokatra ny sisintaniny aorian'ny vaksiny 85% an'ny mponina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana China • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Gao Fu, lehiben'ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina
Raha mihoatra ny 85% ny tahan'ny fanaovana vaksiny amin'ny fiandohan'ny taona 2022, dia vitsy ny aretina ary tsy hisy amin'ireo izay voany no marary mafy na maty.
Ny tahan'ny vaksiny ataon'ny mponina any Shina dia mety hahatratra 85 isan-jato amin'ny fiandohan'ny 2022.
Ny fepetra fanaraha-maso ny valan'aretina misy any Shina ankehitriny dia nahazo fotoana be dia be hamokarana vaksinina ampy sy hampidirana olona.
Miaraka amin'ny tahan'ny vaksiny 85%, ny tahan'ny fihanaky ny COVID-19 dia mety hitovy amin'ny an'ny gripa.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra ambony avy any Ivon-toerana Sinoa misahana ny fanaraha-maso sy fisorohana aretina, Shina dia afaka manokatra ny sisintaniny amin'ny fiandohan'ny 2022, raha vaksiny mihoatra ny 85% ny mponina ao aminy.
Ny fepetra fanaraha-maso ny valan'aretina ankehitriny manohitra ny COVID-19 ao Shina nandresy fotoana be dia be hamokarana vaksinina ampy sy hampidirana olona inoculateur, Gao Fu, lehiben'ny Foibe Fanaraha-maso sy Fikorohana ny Aretina, hoy izy.
Ankoatr'izay dia mihena ihany koa ny virosin'ny virus coronavirus, hoy i Gao.
“Amin'izay fotoana izay, maninona isika no tsy tokony hisokatra?” hoy ny tompon'andraikitra.
Rehefa ny tahan'ny fielezana sy ny fahafatesan'ny Covid-19 dia mitovy amin'ny an'ny gripa, ary toa hiara-hiaina amin'ny olombelona izany, ny ezaka hamongorana ny viriosy dia ady maharitra, hoy izy.
"Amin'izany, tokony hanohy hanome vaksinina olona maro isika, hamorona vaksiny vaovao, ary indrindra hamokatra fanafody mahomby."